မြန်မာပြည်ဖွား ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်ဘုရင်မ အန်နာဗယ်လာလွင် (သို့မဟုတ်) မြတ်မြတ်အေး | Duwun
မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မြန်မာမလေးတစ်ယောက်ဟာ ဗြိတိန်က နာမည်ကျော် ပေါ့ပ်တေးဂီတအဖွဲ့မှာ ခေါင်းဆောင်အဆိုတော်အဖြစ် နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နာမည်က မြတ်မြတ်အေး (ခေါ်) အန်နာဗယ်လာလွင် (Annabella Lwin) ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်ဘုရင်မတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်သူ မြတ်မြတ်အေးရဲ့ ဖခင်က မြန်မာဖြစ်ပြီး မိခင်က အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်နဲ့ဖခင် ကွဲကွာချိန်မှာ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ အင်္ဂလန်ကို လိုက်လာခဲ့ပြီး အသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ခြေချခဲ့သူပါ။
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မြီးကောင်ပေါက်မလေး မြတ်မြတ်အေးဟာ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်းက ဗြိတိန်မှာ လူငယ်လေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲကောင်မလေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အဆိုတင်ပိုင်နိုင်ရုံမကဘဲ သီချင်းတွေ ကိုယ်တိုင်ရေးစပ်နိုင်သလို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုလည်း ကောင်းတဲ့သူပါ။ သူ့ခေတ်သူ့အခါဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော် သက်အရွယ်မှာ ပွင့်လင်ပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့၊ အရှိန်အဝါကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်လည်း သူမကို ပြောစမတ်ပြုကြပါတယ်။
Bow Wow Wow တေးဂီတအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဆိုတော် အန်နာဗယ်လာလွင်က အဖွဲ့နဲ့အတူ အယ်လ်ဘမ်ပေါင်းများစွာ ထုတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကစလို့ ၂၀၁၈ အထိ တေးစီးရီးအယ်လ်ဘမ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး တစ်ကိုယ်တော်သီချင်း ၃ ပုဒ်လည်း သီဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပထမဆုံး သီချင်းဖြစ်တဲ့ C·30 C·60 C·90 Go! သီချင်းကို ကက်ဆက်တိတ်ခွေနဲ့ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကက်ဆက်တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူမဟာ အသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းက မိခင်ရဲ့ အဝတ်ခြောက်လျှော်ဆိုင်မှာ အလုပ်ကူလုပ်ရင်း ကြီးလာရင် လေယာဥ်မယ်လုပ်မယ်လို့ပဲ စိတ်ကူးယဥ်ခဲ့သူပါ။ လေယာဥ်ပေါ်မှာ လှလှပပလေးဝတ်ဆင်ပြီး လူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရင်း ကမ္ဘာပတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးလေးနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မိခင်ကိုကူညီရင်း ‌ရေဒီယိုသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို လိုက်ဆိုနေတဲ့ သူမရဲ့အသံကို ဂီတပညာရှင်တစ်ဦးက ကြားသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူမဟာ တစ်ခါမှ စိတ်ကူးမယဥ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်ဘဝကို ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။
သီဆိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သော သီချင်းအယ်လ်ဘမ်များနဲ့ သီချင်းများ
အန်နာဗယ်လာလွင်ဟာ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး တေးသီချင်းထုတ်လုပ်မှုတွေကို ၂၀၁၈ အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Bow Wow အဖွဲ့နဲ့အတူ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်တွေက
Your Cassette Pet (1980)
See Jungle! See Jungle! Go Join Your Gang Yeah, City All Over! Go Ape Crazy! (1981)
The Last of the Mohicans (1982)
Teenage Queen (1982)
I Want Candy (1982)
Original Recordings (1982)
The Best of Bow Wow Wow (Receiver Records Limited) (1989)
Girl Bites Dog: Your Compact Disc Pet (1993)
Go Wild, The Best of (1993)
Aphrodisiac... Best of (1996)
The Best of Bow Wow Wow (RCA Records) (1996)
Wild in the U.S.A. (1998)
I Want Candy – Anthology (2003)
I Want Candy (EP) (2007)
Love, Peace & Harmony – The Best of Bow Wow Wow (2008)
Mile High Club Live (2009)
John Peel Session (20 October 1980) (2011)
Your Box Set Pet (The Complete Recordings 1980–1984) (2018) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တော်သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းသီချင်းတွေက ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ Fever၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ Super Boom!! နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ Willow Tree တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အဆိုတော်ဘဝက အရာရာပြည့်စုံကောင်းမွန်လွန်းနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲအတိုက်အခိုက်များစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ပြောရရင်တော့ Bow Wow Wow အဖွဲ့ ဒုတိယမြောက် single အယ်လ်ဘမ်အောင်မြင်မှုမရခဲ့တဲ့အတွက် EMI Records ကုမ္ပဏီက သူတို့နဲ့ လက်တွဲဖြုတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် RCA Records နဲ့ လက်တွဲလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီနဲ့ ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကာဗာပုံအတွက် အသက်၁၄နှစ်အရွယ် Anabella Lwin က ဝတ်လစ်စလစ်အနေအထားနဲ့ သရုပ်ဖော်ခဲ့ရပါတယ်။ ဝေဖန်မှုများစွာရင်ဆိုင်ရင်း ရှေ့ဆက်ခဲ့ရတဲ့ သူမဟာ အောင်မြင်မှုတချို့ ဆက်လက်ရရှိနေခဲပ့ါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကမှာ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက် ၁၉၈၃ အဖွဲ့ကနေ သူမကို ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းကို NME မဂ္ဂဇင်းမှာပါလာမှသာ အန်နာဗယ်လာတစ်ယောက် ရုတ်တရက်သိလိုက်ရပါတယ်။
“ကျွန်မတို့တွေက စက်ြာဝဠာကြီးကို ဒီထက်ပိုပြီး ယုံကြည်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ဘုရားစာရွတ်တယ်။ ကျွန်မ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ချင်တယ်။ လမ်းမမှားချင်ဘူး။ အလုပ်တွေကို ဒီလိုပဲ လုပ်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို မဖြုန်းတီးနိုင်ဘူး။ မတူကွဲပြားအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်များစွာအတွင်း ကျွန်မ အများကြီး မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလောကထဲမှာပေါ့” လို့ အန်နာဗယ်လာလွင်က ၂၀၁၆ ခုနှစ်က Louder Than War ဂီတဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဖြေဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူမဟာ နေ့စဥ် တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ် ဘုရားစာရွတ်တယ်လို ဆိုပါတယ်။ နေ့တစ်နေ့ စစချင်း ဘုရားစာရွတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အန်နာဗယ်လာလွင်ရဲ့ ဖခင်က ထေရဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး မိခင်ကတော့ ခရစ္စယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာနှစ်ခုစလုံးနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ သူမဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာက သူမရဲ့ခန္ဓာအတွင်းမှာ ကိန်းအောင်းနေတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး ဘုရားစာရွတ်ဆိုရခြင်းက သူမကို အထောက်အကူများစွာပေးတယ်လိုလည်း ယုံကြည်ထားသူပါ။
အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ်မှာ ဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမ
အန်နာဗယ်လာလွင်က တစ်ကိုယ်တော်အနုပညာရှင်အဖြစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ 'Super Boom' အယ်လ်ဘမ်နှင့် EP 'Willow Tree' ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူမဟာ ငွေကြေးအရ ပူပင်စရာမရှိတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ အသက် ၅၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုက ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ သန်းနဲ့ ၅ ဒသမ ၅ သန်းကြားမှာ ရှိမယ်လို့ https://idolcelebs.com/ က ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။
တစ်ချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ပေါ့ပ်ဘုရင်မဟာ အခုဆိုရင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လော့ဆန်းဂျလိစ်မှာကြောင်လေးနှစ်ကောင်ကို အစာကျွေးပြုစုရင်း ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်း Classic Pop မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
Annabella Lwin Interview: ‘Being in Bow Wow Wow was like jumping onatrampoline…’ / Classic Pop Magazine/2020/01
Women’s History Month Tribute: Bow Wow Wow’s Annabella Lwin/ www.spin.com/2021/03